‘रुसले विश्वकप उपाधिका लागि अन्तिम समयसम्म लड्नेछ’ : राष्ट्रपति पुटिन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘रुसले विश्वकप उपाधिका लागि अन्तिम समयसम्म लड्नेछ’ : राष्ट्रपति पुटिन
बीबीसी । रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले आफ्नो देशले विश्वकप उपाधिका लागि अन्तिम समयसमम प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन् । \_
विश्वकपको आयोजक भएका हुनाले रुस कुनै छनौट खेल नखेली प्रतियोगिताका लागि छनौट भएको टोली हो । तर रुस अन्य ३१ टोली मध्य फिफा वरियतामा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेको टोली हो ।
बिहिबार उद्घाटन खेल हुनअघि राष्ट्रपति पुटिनले आफ्ना खेलाडीले हालैका प्रदर्शनमा राम्रो प्रदर्शन गरेकामा खुशी व्यक्त गरे । रुसले आफ्नो अन्तिम मैत्रीपूर्ण खेलमा ट्युनिसियालाई २–० ले पराजित गरेको थियो ।
अक्टोबरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूणै खेलमा पनि रुसले दक्षिण कोरियालाई ४–२ ले पराजित गरेको थियो । यद्यपी गत महिना रुसले मैत्रीपूर्ण खेलहरुमा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, फ्रान्स र अस्ट्रियासँग हार व्यहार्न परेको थियो ।
रुसले स्पेन, इरान र टर्किसँग भने बराबरी खेलेको थियो । विश्व वरियतामा ७० औं स्थानमा रहेको आयोजक रुस उद्घाटन खेलका प्रतिस्पर्धी साउदी अरेबीयाभन्दा ३ स्थान तल छ ।
विश्वकप उपाधिका लागि रुसले अन्तिम समयसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै पुटिनले टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।